Yintoni i-satellite? Ulwazi lweMfundo kwiTeknoloji yeTeknoloji
Iingcamango ezisisiseko ze-satellite
Imibuzo Eyisiseko ngeSatellites
Zivela njani i-satellites? Ukunxibelelana ngothungelwano lwe-intanethi yiphumo lophando kwiindawo zonxibelelwano, ukwenzela ukuba ufumane ukwanda okukhulu kwamandla okusebenza kwindleko ephantsi kakhulu.
Ezinye iinkonzo ezinikezelwa ngama-satellites? Kwiinkqubo zokunxibelelana nge-satellite, kwiindawo ezinokude, nazo zinokukwazi ukuqokelela okanye ukusabalalisa iimpawu ukusuka kwindawo okanye kwiindawo ezahlukeneyo kunokuba zithunyelwe ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Yintoni i-satellite kwaye isebenza njani? I-repeat ye-elektroniki ehlala kwindawo, ifumana iimpawu eziveliswa emhlabeni, ziyakhulisa kwaye zibuyisele emhlabeni. Kwaye isebenza ngenxa yokuba umsakazo onomculo "A" uthumela uphawu olufunyenwe yi-satellite. I-satellite iyakwandisa kwaye ibuyise kwakhona ngokukhawuleza. Umnxeba we-radio "B" uyamkela kwaye uyiphendule. Ngoko qalisa uqhagamshelwano lwe-satellite.
Ziziphi ii-satbiti ezisetyenziswa kakhulu? Ngokuqhelekileyo onke ama-satellites asetshenzisiweyo namhlanje ukunxibelelana ngamanethiwekhi ezinkampani yi-GEO. Izicelo eziphambili zezi satellites zibonisa ukutshintshwa kweengongoma.
Ezinye iingenelo zokusebenzisa ama-satellites aphakathi kwe-orbital (MEO) Ama-satellites aphakathi kwe-Earth orbit aphakamileyo phakathi kwe-10075 kunye neekhilomitha ze-20150. Ngokungafani ne-GEO (Geosynchronous Earth Orbit) isikhundla sabo esifanelekileyo ngokubhekiselele kumhlaba asilungisiweyo. Ukuba kwindawo ephantsi, kukho inani elikhulu lama-satellites ukuze kufumaneke ukukhawulwa kwehlabathi, kodwa i-latency iyancitshiswa kakhulu.
Ukwahlula ama-satellites ngenjongo okanye kwi-satellite observation. Satellites zeMeteorological. Satellites zokuhamba. Satellites. Ama satellites aseMpi kunye neentlola. Satellites zeHam.
Imisebenzi ephambili ye-satellite telecommunications Ukutshintshela iimpawu zephatha zokufumana ukubuyisela kwakhona kwi-downlink. Kanye nokutshintsha ubukhulu beempawu zokuthintela ukukhusela iingxaki zokuphazamiseka
Olunye lwezakhiwo ze-satellite I-satellite iquka umrhumo wokuhlawula kunye neqonga. Ukuhlawula umrhumo kubandakanya ukufumana kunye nokuthumela i-antenna, kunye nezixhobo zecomputer ezixhasa ukuhanjiswa kweenkcukacha ezithwala iimpawu. Iqonga liquka zonke iissystem ezenza ukuba umrhumo wokuhlawula usebenze.
I-satellite iyinkqubo eyinkimbinkimbi ehlanganiswe neenkqubo ezincinane ezincinci. Ezinye zazo ... Amanqaku okuLawula Inkqubo yokuPhathwa kweeNgcaciso igcina isalathiso kwixesha le-satellites rhoqo. Inkqubo isebenzisa iicensors (njengamehlo), ngoko i-antenna ye-satellite "ibona" ​​apho ibonisa khona. I-satellites eyenza ukuba uphando lwezenzululwazi ludinga inkqubo yolawulo oluchanekileyo ngakumbi kune-satellite satellite. I-Command and Data Subsystem Iinkqubo zolawulo zokucwangciswa kwedatha kunye nemiyalelo yilabo abaphethe yonke imisebenzi ye-spacecraft (i-brain satellite). Ishini seshini Inkqubo yokunxibelelana ine-transmitter, receiver, kunye nee-antenn eziliqela ukuthumela imiyalezo phakathi kwe-satellite kunye nomhlaba. Ulawulo lomhlaba ulisebenzisa ukuthumela imiyalelo yokusebenza kwikhomputha ye-satellites. Le nkqubo iphinda ithumele imifanekiso kunye nedatha efunyenwe yi-satellite ukubuyela kwiinjineli emhlabeni. Ukunikezelwa kwamandla Wonke ama-satellites asebenzayo ayadinga amandla okusebenza. Ilanga linikeza ukuba amandla kwiindawo ezininzi zasesatellite zihamba ngokujikeleza emhlabeni. Le nkqubo isebenzisa i-solar arrays ukwenza ugesi kwi-sun, ibhetri ukuze igcine amandla, ize isasaze kwizixhobo kuzo zonke i-satellite. Umrhumo wokuhlawula umvuzo I-Payload zonke izixhobo ze-satellite kufuneka zenze umsebenzi wazo. Kuhluke kumsebenzi ngamnye. I-satellite satellite kufuneka idinga i-antenna ebonisa ukuthumela i-TV okanye i-Phone. I-satellite yokuthatha iifoto zomhlaba idinga ikhamera yedijithali ukuthatha imifanekiso yoMhlaba. I-satellite yesayensi yenzululwazi idinga i-telescope kunye neentlobo zengqondo ukurekhoda ukubukwa kweenkwenkwezi nezinye ieplanethi.
Ikamva ekuphuhliseni ama-satellites Ukulindeleka kokuphuhliswa kwama-satellites okuhlaziywa ngokutsha, okuya kuba ne-sampler yokufakelwa kwezixhobo ezifakwe kwi-satellite ngokwayo kwaye ziza kuphucula izibonakaliso eziphathekayo. Izixhumanisi ze-inter-satellite, eziza kunciphisa ixesha lokusasaza phakathi kwamaqhagamshelwano apho amaninzi amaninzi angenelela khona. Ukusetyenziswa kwamaziko aphakamileyo (30 / 20 Ghz. Kunye ne-50 / 40 Ghz.); Okwangoku, ezi zikhulu zibangelwa iingxaki eziphezulu kakhulu zokunakekelwa, ikakhulu ngenxa yemvula.
Iillar Arrays Izixhobo zelanga zizakhiwo ezinkulu ezenziwe ngamawaka amancinci elanga elanga. Iselinye ngasinye sivelisa umbane kwilanga. Xa zonke iiseli zixhunyiwe kunye, zivelisa amandla amaninzi eziza kuvula izixhobo ze-satellite kwaye zikhuphe iibhetri ze-satellite.
Blanquet eshushu Ingubo ye-thermal iyinxalenye yeseshishini yolawulo lwe-thermal. Ingubo yenziwe ngumbumba omncinci obandakanya i-satellite yonke, kwaye wenza imisebenzi elandelayo: igcina i-satellite efudumele efudumele kwaye ipholile ekushiseni. Ama-satellites abonakaliswe kwiqondo lokubanda kakhulu kwaye kushushu kakhulu (-120 ukuya ku-180). Ngaphandle kwengubo ye-thermal, into ebuthakathaka yecomputer iya kubonakaliswa.
Batery Ibhethri inxalenye yeshini sessystem. Gcina umbane wamandla owenziwe yimizila yelanga ukuze isetyenziswe zonke izixhobo zombane ze-satellite.
Izakhiwo zeBhasi Isiqabana esibalulekileyo sesathelayithi yisakhelo esilugcina ndawonye. Isakhiwo sebhasi sivame ukuba senziwe ngezinto ezibonakalayo ezikhanyayo kwaye ezinqabileyo kakhulu eziya kuzinzela ngokwaneleyo ukuxhasa zonke iziqwenga, kodwa zingenzima kangangokuthi i-satellite ayikwazi ukuphakanyiswa kwi-orbit.
Abaqhubi beenkwenkwezi Abaphandle inkwenkwezi bayinxalenye yeshini sessystem. Ziyi-telescopes encinci efuna indawo kwaye ifunde indawo yeenkwenkwezi. Ama-satellites asebenzisa indawo yeenkwenkwezi ukuhamba, njengokuba sisenza emhlabeni.
Amasondo afanayo Amasondo asabelayo nawo ayinxalenye yeshini sessystem. Ezi zijikeleza i-satellite kwiindlela ezahlukeneyo. I-Force yayo ibangela ukuba i-satellite ihambe kwaye ibhekiselele kwiindlela ezithile ezithile.
I-O Inkqubo Inkqubo yenkxaso-mphulo yinkqubo yenkcazelo yedatha kunye nomyalelo wesiseko. Balawula ukuhamba kweedatha ngaphakathi nakubakhompyutha.
Omni Antennas I-omni antenna inxalenye yenkqutyana yeshini. Zisetyenziselwa ukuhambisa imiyalezo phakathi kokulawulwa kwe-satellite kunye nomhlaba.
Ikhomputha yekhompyutha Ikhompyutheni yendiza inxalenye yedatha kunye nomyalelo wesiseko. Le ngongoma yesatellite esilawula yonke imisebenzi kwi-satellites.
Umthumeli / umamkeli Umthumeli / umamkeli uyinxalenye yessystems yoqhagamshelwano. Xa ama-satellites adinga ukuthumela ifreyimu yomhlaba, umtshintshi utshintsha idata yesithombe kwisibonakaliso esinokukhishwa phantsi. Xa iinjineli zithumela umyalelo kwi-satellite, i-satellite receiver ikhetha uphawu kwaye ithumela utshintsho kwisigidimi ukuba ikhompyutha ye-satellite iyakwazi ukuyiqonda.
Icandelo lomhlaba Iqukethe zonke izikhululo zomhlaba; Ezi zinto zihlala zixhunyaniswe nomsebenzisi wokugqibela ngokusebenzisa inethiwekhi yomhlaba, okanye kwimeko yezitishi ezincinci, ezixhomekeke ngqo kwisixhobo somsebenzisi wokugqibela.